Maahmaahyadii 12 SOM;NIV - Ku alla kii edbinta jecelu aqoon buu - Bible Gateway
Maahmaahyadii 11Maahmaahyadii 13
Maahmaahyadii 12 Somali Bible (SOM)
12 Ku alla kii edbinta jecelu aqoon buu jecel yahay,
Laakiinse kii canaanta necebu waa doqon.
2 Rabbigu ninka wanaagsan raalli buu ka ahaan doonaa.
Laakiinse khaayinka wuu xukumi doonaa.
3 Ninna shar kuma dhismi doono,
Laakiinse kuwa xaqa ah xididkooda weligiis lama dhaqaajin doono.
4 Naagtii toolmoonu waxay ninkeeda u tahay taaj,
Laakiinse tii ceebalay ahu waa sida qudhun isaga lafaha kaga jira.
5 Kuwa xaqa ah fikirradoodu waa qumman yihiin,
Laakiinse kuwa sharka leh taladoodu waa khiyaano.
6 Kuwa sharka leh erayadoodu waa gabbasho ay u gabbadaan si ay dhiig u daadiyaan,
Laakiinse kuwa qumman afkooda ayaa samatabbixin doona.
7 Kuwa sharka leh waa la afgembiyaa, oo mar dambena lama arki doono,
Laakiinse kuwa xaqa ah gurigoodu waa sii taagnaan doonaa.
8 Nin waxaa loogu bogi doonaa sida xigmaddiisu tahay,
Laakiinse kii qalbigiisu qalloocan yahay waa la quudhsan doonaa.
9 Kii la fudaydsado oo midiidin lahu
Waa ka wanaagsan yahay kii isweyneeya oo cunto u baahan.
10 Nin xaq ahu waa u tudhaa neefkiisa,
Laakiinse kuwa sharka leh naxdintoodu waa naxariisla'aan oo keliya.
11 Kii dhulkiisa beertaa cunto badan buu ka dhergi doonaa,
Laakiinse kii waxmatarayaal raacaa waa garaad daranyahay.
12 Kan sharka lahu wuxuu damcaa dabinka xumaanfalayaasha,
Laakiinse xididka kuwa xaqa ahu midhuu dhalaa.
13 Kan sharka leh waxaa u dabin ah xadgudubka bushimihiisa,
Laakiinse kan xaqa ahu dhibaatada wuu ka bixi doonaa.
14 Nin wuxuu wanaag kaga dhergi doonaa midhaha afkiisa,
Oo nin walbana waxa gacmihiisu sameeyaan ayaa loo abaalgudi doonaa.
15 Nacaska jidkiisu waa la qumman yahay isaga,
Laakiinse kii caqli lahu taladuu maqlaa.
16 Nacaska xanaaqiisa haddiiba waa la gartaa,
Laakiinse ninkii miyir lahu ceebtuu qariyaa.
17 Kii runta ku hadlaa wuxuu muujiyaa xaqnimada,
Laakiinse markhaatiga beenta ahu wuxuu muujiyaa khiyaanada.
18 Waxaa jira mid u hadla sida seef wax mudaysa,
Laakiinse kan caqliga leh carrabkiisu waa caafimaad.
19 Bushintii runta sheegtaa weligeedba way sii taagnaan doontaa,
Laakiinse carrabkii beenta sheegaa daqiiqad buu joogaa.
20 Kuwa sharka ku fikira qalbigooda khiyaanaa ku jirta,
Laakiinse taliyayaasha nabaddu farxad bay leeyihiin.
21 Sharna kan xaqa ah ku dhici maayo,
Laakiinse kuwa sharka leh xumaan baa ka buuxsami doonta.
22 Bushimaha beenta sheega Rabbigu wuu karhaa.
Laakiinse kuwa runta ku shaqeeya wuu ku farxaa.
23 Ninkii miyir lahu aqoontuu qariyaa,
Laakiinse qalbiga nacasyadu wuxuu naadiyaa nacasnimo.
24 Kuwa dadaala gacantoodu wax bay xukumi doontaa,
Laakiinse caajisiinta hawl baa la saari doonaa.
25 Ninkii caloolxumo gashaa wuu soo gotaa,
Laakiinse eray wanaagsanu waa ka farxiyaa isaga.
26 Kan xaqa ahu deriskiisuu hanuuniyaa,
Laakiinse kuwa sharka leh jidkoodu wuu ambiyaa iyaga.
27 Ninkii caajis ahu ma dubto wuxuu soo ugaadhsaday,
Laakiinse ninkii dadaala maalkiisu waa qaali.
28 Jidka xaqnimada nolol baa taal;
Oo waddadeedana dhimasho kuma jirto.